ရန်ကင်း အထက(၂) က ကျောင်းအုပ်ကြီး ဓါးပြတိုက်ပြီဗျ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရန်ကင်း အထက(၂) က ကျောင်းအုပ်ကြီး ဓါးပြတိုက်ပြီဗျ ။
ရန်ကင်း အထက(၂) က ကျောင်းအုပ်ကြီး ဓါးပြတိုက်ပြီဗျ ။
Posted by mG on Dec 13, 2010 in News | 11 comments
Monday, 13 December 2010 11:13 administrator
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်း အထက (၂) က ကျောင်းအုပ်ကြီးက နေရာပြောင်းရွေ့ရမည့် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူငယ်တန်းမှ ၁၀ တန်းအထိ ကျောင်းသားများထံမှ တစ်ယောက်လျှင် ၅၀၀၀ ကျပ်အလှူငွေကောက်ခံပါတယ်..ဆရာ/ဆရာမ များထံမှလည်း တစ်ဦးလျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်ကောက်ခံတယ်လို့ သိရပါတယ်..မပေးမနေရ ပေးရမယ်လို့ အတန်းပိုင်ဆရာတွေကလည်း ကျောင်းသားတွေကို ချိန်းခြောက် ပြီးကောက်ခံတယ်လို့ သိရပါတယ်..မပေးနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေက ကျောင်းမတက်ဘဲ ကျောင်းပုန်းနေပါကြောင်း ..ကျောင်းသားမိဘ တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်.. ဒါဟာ နေ့ ခင်းကြီး ဓါးပြတိုက်တာလို့ လည်း ပြောပြသွားပါတယ်..
ရွှေမန်း Media မှကူးယူတင်ပြထားပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းတွေဟာ အခြေအနေ ပိုဆိုးသည်ထပ် ပိုဆိုးလာသည်ကို ပြည်တွေ နဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေ ပေါင်းပြီးတော့
ဆိုးပ ၊ သို့ သော်သူ ကမှ ကျောင်းနေရာပြောင်း ဖို့ဆို ပြီး ရည်ရွယ် ချက် ရှိသေးတယ်။ ကျုပ် တို့ ကျောင်းဆို ( ဟိုတုန်းကပေါ့) ကွန်ပျူတာ ခန်း လုပ် ဖို့ ဆို ပြီး တစ်ရောက် ငါးရာ ကောက် ၊ ဘာဖြစ် လာ လဲဆိုတော့ ကျောင်းမှာ တော့ ဘာ မှ ဖြစ် မလာ ဘူး။ ကျောင်းအုပ် ကြီး သား တွေတော့ ရောက် သွားတာပဲ …. သူကိုယ် တိုင် ကတော့ ။ အဲ စာ သိပ် မတက်တဲ့ သူသမီး က တော့ မြောက်ဥက္ကလာ ၊မေဒါဝီ လမ်း မှာ ”မော်” ဆိုပြီး ဆိုင် တဆိုင်ဖြစ် သွား လေရဲ့။မြောက်ဥက္ကလာ ကလူတွေ တော့သိ ကြမှာ ပါ။
ဆိုးပ ၊ သို့ သော်သူ ကမှ ကျောင်းနေရာပြောင်း ဖို့ဆို ပြီး ရည်ရွယ် ချက် ရှိသေးတယ်။ ကျုပ် တို့ ကျောင်းဆို ( ဟိုတုန်းကပေါ့) ကွန်ပျူတာ ခန်း လုပ် ဖို့ ဆို ပြီး တစ်ရောက် ငါးရာ ကောက် ၊ ဘာဖြစ် လာ လဲဆိုတော့ ကျောင်းမှာ တော့ ဘာ မှ ဖြစ် မလာ ဘူး။ ကျောင်းအုပ် ကြီး သား တွေတော့England ရောက် သွားတာပဲ …. သူကိုယ် တိုင် ကတော့ တိုက်နဲ့ ဖြစ်။ အဲ စာ သိပ် မတက်တဲ့ သူသမီး က တော့ မြောက်ဥက္ကလာ ၊မေဒါဝီ လမ်း မှာ ”မော်” ဆိုပြီး ဆိုင် တဆိုင်ဖြစ် သွား လေရဲ့။မြောက်ဥက္ကလာ ကလူတွေ တော့သိ ကြမှာ ပါ။
တနေ့တနေ့သူတို့ခေါင်းထဲမှာ၇ှိတာကလေးတွေစာသင်ဖို့ထက်…ေ၇ာက်လာမစဲတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖား၇၊ ခစား၇၊ ၇ပ်တောင်ခပ်ပေး၇၊ လက်ဆောင်ပဏာပေး၇ နဲ့ဘဲအလုပ်၇ှုပ်နေလို့ပါ။ (စာသင်ဘို့ကိစ္စကအိမ်ေ၇ာက်မှဝိုင်းကျူ၇ှင်မှာဇာတ်လမ်းစဘို့လိုတာဆိုတော့၊ စာသင်ကျောင်းကဟန်ပြသက်သက်မှတပါး…တခြားမ၇ှိပါ။)
၇ာထူးတိုးမြှင့်၇၇ှိေ၇း၊ နေ၇င်းအလုပ်ကောင်း၇င်လဲ၇ာထူးတည်မြဲေ၇း၊ စတာတွေဘဲခေါင်းထဲ၇ှိလို့ပါ..။
ဘာတဲ့…တခေတ်ထလိုက်ပါသေးတယ်…”တပည့်မ၇ှား၊ တပြားမ၇ှိ၊ ပီတိကိုစား၊ အား၇ှိပါ၏”..တဲ့။ တော်တော်ပေါက်ပေါက်၇ှာ၇ှာလဲနိုင်ကြပေသကိုး…။
ဓါးပြဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် တပ်မတော်က ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးခဲ့တာပြောသွားတာကိုး….
တပ်မတော်ကလုပ်လို့ ကျောင်းသားတွေ အင်္ကျမီမဝတ်နိုင်။
အခုလို ဆရာတွေထပ်လုပ်တော့ ကျောင်းသားတွေ ကိုယ်တုန်းလုံးဖြစ်ရော……
ဖောင်ကြီးဆရာဆရာမ အထူမွမ်းမံသင်တန်းမှာ ဖားနည်း ဖိနည်း ခိုးနည်း ကိုက်နည်း မျိုးစုံသင်ပေးခဲ့တယ်လေ….
ဒါနဲ့ အခုပေးရတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေလည်း မကျေနပ်ပေမယ့်……
သူတို့အလှည့်ကျရင် ဒီအတွက် အတိုးနဲ့ ပြန်တိုက်ဖို့ အံ့ခဲထားကြလေရဲ့….
ဖခင်ဘုရင်ကြီးမှ မကြားလိုပါ~~ မကြားလိုပါ~~
အောင်မလေးလေးနော်~~~~ကြားရတဲ့အချက် ဘယ်စနက်ကြောင့်ပါလိမ့် !!!
အခုတစ်လောကျောင်းတိုင်းက ဆရာကြီးတွေ ဓားမြတိုက်နေတာ ခေတ်စားနေတယ်ထင်တယ် . အိမ်မှာလဲ တူမလေး ကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကျောင်းရေသန့်လုပ်ဖို့ တစ်ယောက်ကို 2500 မထည့်မနေရတဲ့ .ကလေးက သူ့အမေကို ပိုက်ဆံအတင်းတောင်းနေလေရဲ့ ပိုက်ဆံပါမလာရင် ဆရာမက အတန်းထဲ ပေးမ0င်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပဲ …
အထက ( ၂ ) လမ်းမတော် ကျောင်းအုပ်ကြိးကတော့ ပင်စင်သွားတေျာ့မှာမို့ ကျောင်းသားသစ် တဦး တခြားကပြောင်းလာရင် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ ကျနော့သားလဲပေးလိုက်ရတယ် ..။ နောက်ပြီး
ညောင်ပင်လေးဈေးဝိုင်းဆိုတာရျိသေးတယ် တောင်ကြီးဘက်က ကျောင်းသားတွေ စုနေတာများတယ်
တ၀ိုင်းလုံးကို လက်ခံပြီး section တခုသပ်သပ် ပေးထားတယ် ..။ တိုက်ခန်းတော့ ၀ယ်ပြီးပြီတဲ့ …။
သူတို့လခနဲ့လဲ ပင်စင်သာသွားရော ဘာမှအဖတ်မတင်တော့ … ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရပါ့မလဲ ….။
ရမည်းသင်း နည်းပညာမှာ လည်း ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကျောင်းစအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အလှူခံပုံးထောင်ပြီး
အလှူခံနေတယ်လို့ ကျောင်းသားတွေပြောနေသံကြားလိုက်ရတယ် ဘာအတွက်လဲမေးကြည့်တော့ မသိဘူးတဲ့လေ